Oge erugo Gbanwee Companylọ Ọrụ Gị | Martech Zone
Wednesday, June 3, 2009 Tọzdee, Disemba 31, 2013 Douglas Karr
Mgbe ụlọ ọrụ na-akọwa njikwa njikwa ha, ị na-enwetakarị eserese mara mma nke na-edozi ndị ọrụ site na onye ha kọọrọ. A na-edepụta ndị nwere ike na ịkwụ ụgwọ ahụ n'elu… iji nke mkpa .
Ọ bụghị ihe ijuanya. Nke a na-etinye onye ahịa na ala nke ndị isi ụlọ. Ndị ọrụ ahụ na-ahụ maka atụmanya na ndị ahịa kwa ụbọchị bụ ndị kachasị akwụ ụgwọ, enweghị uche, na-arụ ọrụ gabiga ókè na adịghị mkpa ndị ọrụ mmadụ na ụlọ ọrụ. A nkwalite na-akpali onye nnọchianya ndị ahịa pụọ site n'aka onye ahịa na ịbanye na njikwa ebe nsogbu dị mụbara Nye njikwa. Nke a ga-eme n'ihi na ndị ọrụ enweghị ntụkwasị obi, ikike ma ọ bụ ikike ịme mgbanwe ndị dị mkpa mezuo ihe ndị ahịa na-atụ anya ya.
You nwetụla mgbe ị na-eche banyere nke a dị ka a ahịa? Importance dị mkpa dị ka ọkwa n'okpuru nke onye ọrụ kacha ala. Ndị ọrụ nwere ụgwọ pekarịsịrị ụgwọ, obere oge na ohere pere mpe nke mbuli ma ọ bụ ohere. Mma. Sịkwa ihe mere ndị ahịa na-enupụ isi!
Enyi Kyle Lacy na nso nso a enyocha akwụkwọ Jason Baer, ​​kwenye na tọghatara:
N'okwu Jason, ndị na-elekọta mmadụ ugbu a na-ebute ụzọ nke ahụmịhe ndị ahịa. Echiche na echiche nke ụdị adịghịzi arụ na ụlọ mbadamba (nke ọtụtụ mmadụ ga-achọ ikwere) mana emepụtara n'ime ime ụlọ anyị, ụlọ oriri na ọ ,ụ ,ụ, ebe nzukọ, na kiiboodu.
Mgbe ị gụrụ gbasara ihe ịga nke ọma Zappos, Tony Hsieh na-aga n'ihu na-arụ ọrụ ndị ahịa yana otu esi enye ndị nnọchi anya ndị ahịa ya ike iji nyere ndị ahịa aka. Ọ bụ ezie na ha nọ na ala nke usoro nkwụghachi ụgwọ, Zappos agbanweela ikike ndị isi n'ụzọ dị irè.
Oge eruola na ụlọ ọrụ niile gwụchara akụkọ na ike dị elu wee tụgharịa ya. Ndị ahịa kwesịrị itinye gị n'ọkwá dị elu, ndị ọrụ gị ga-enwe ikike ma nwee ntụkwasị obi ime mkpebi ziri ezi maka onye ahịa. Ndị njikwa gị, ndị isi na ndị isi kwesịrị ịbụ ege nye ndị ọrụ gị na-eche ihu na ịzụlite atụmatụ dị ogologo oge dabere na ntinye ha.
Ka m na-arụrụ ụlọ ọrụ ọrụ, achọpụtara m na ndị isi kachasị ukwuu bụ ndị na-eji akụ ha eme ihe nke ọma, wepụ ụzọ mgbochi, nye ndị ọrụ ike, ma n'ezie etinye aka ọ bụla ahịa. Boardlọ osisi ọ bụla m na-agba mgba nke m gara bụ nke jupụtara na narcissists na-eche na ha bụ isi ihe ga-eme ka ihe ịga nke ọma ha, na ha kwesịrị ịnọ ebe ha nọ, na ha ma karịa ndị ahịa.
Otu ihe magburu onwe ya sitere na nlaazu a bụ na anyị na-ahụ ka ndị a na-ada dị ka ijiji. Kedu ka ndị ahịa gị si ele anya na azụmahịa gị? Ndi ha di n’elu ka obu ukwu nke ogwe ike? Chee echiche banyere ya.
Tags: ahịaahịa chụpụrụahịa nkwadoLeadership
Jun 4, 2009 na 1:21 AM
Ezigbo post Doug. Nri echebara echiche na oge a nke ndị isi ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ karịrị akarị na-eche na ụlọ ọrụ ha bụ ịkwanye obere akpa ha. Onye ahia ahu bu eze - obughi uzo ozo.
Jun 4, 2009 na 10:47 AM
Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ nke ukwuu, ọ bụ ezie na ọ na-esiri ha ike imezu.
Ọganiihu, agam n’ihu na ngbanwe na-esiri m ike ime mgbe niile karịa ịsi n’ọkwa na ọdịda. 🙂
Mgbe m rụrụ ọrụ maka otu nnukwu ndị na-ebu waya, ọ na-eju m anya oge niile ka ha si ewepụta atumatu ndị na-eme ka ndị ahịa / ndị ọrụ nwee ike ime NTA maka onye ahịa ahụ. Ha na-echekwa ihe kpatara njigide ji dị ala. Ndị ọchụnta ego, n'agbanyeghị ụdị "ngwaahịa" ọdịnala ha, kwesịrị ịghọta na ha niile nọ na ụlọ ọrụ ọrụ.
Jun 5, 2009 na 7:14 AM
Okporo mmiri ike owuwu na-atụgharị ya…
Mara mma post Doug na ekele maka njikọ ahụ.
Blog Jason Baer bara uru karịa oge nke abụọ nke ịgụ oge.